Vee24: Ka Qaybqaadashada Fiidiyowga Tooska ah wuxuu ku kordhinayaa beddelaadda 38% | Martech Zone
Sabtida, Juun 18, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan, waxaan la kulmay khibraddii ugu yaabka badneyd ee demo Vee 24Xalka fiidiyowga ee internetka. Shirkaddu waxay ku dhowdahay dhowr sano oo kaamil ah qalabka isku dhafan iyo softiweerku sidii xalka adeegga ee sida cajiibka ah loo awoodi karo.
Waa maxay Vee 24 dhammeeyay wax aan yareyn oo cajiib ah. Markuu macmiilku saxeexo, waxay marka hore iibsadaan qalabka, oo ay ku jiraan munaarad leh kamarad fiidiyoow ah, laydhadhka hore, kormeeraha baahinta iyo xitaa iftiinka hawada. Kumbuyuutarka ayaa ah 24 monitor shaashadda shaashadda taabashada ee ku shaqeeya Windows 7 iyo barnaamijka Vee24.
Software-ka si fudud uma furmayo oo fiidiyow ayuu bilaabayaa. Waxay ku soo baxeysaa muuqaal qurxoon oo kuugu deeqaya inaad kula sheekaysato qofka dhinaca kale. Soo bixidda waxaa bilaabi kara wakiilka, si toos ah ayaa loo bilaabi karaa, ama isticmaalaha ayaa gujin kara tab fiican shaashadda dhinaca si uu u bilaabo.
Haddii isticmaaluhu aqbalo casuumaadda, softiweerku wuxuu kugu xirayaa adiga wakiilka. Waxay la mid tahay furitaanka wada sheekaysiga fiidiyowga (waad shidi kartaa kamaraddaada sidoo kale, wakiilka wuu arki karaa dhammaan faahfaahinta biraawsarkaaga (Operating System, Browser, iwm.) habka ugu macquulsan ee laguugu siinayo
Waxaa laga yaabaa in muuqaalka ugu yaabka badan uu yahay in Vee24 sidoo kale ay leedahay muuqaal wadaag ah - oo u oggolaanaya dukumiintiyada, awoodaha ama feyl kasta oo kale in la furo lana wadaago. Kaliya ma wadaagi kartid… waxaad dhab ahaan la falgeli kartaa wakiilka. Maamulaha guud Andy Henshaw ayaa igu soo dhex maray aniga oo amraya fasax goob kale… waayo aragnimadu waxay ahayd mid layaableh, ma sahlanaanin. Waxaan labadeenaba awoodnay inaan wax ka badal ku sameyno foomka isla bogga, isla waqtigaas oo aan soo gudbino!
Natiijooyinka macaamiisha Vee24 horeyba waxay u ahaayeen kuwa layaableh… shirkadaha sida Ford, Lexus, Lands 'End, Mini Couper, Heels.com iyo boqolaal shirkado kale ayaa arka 38% kor u qaadista heerarka beddelashada. Jawaab celinta macaamiisha ee nidaamka ayaa sidoo kale laga saaray jaantusyada sidoo kale.
Waa kuwan muuqaalka muuqaalka Vee24 ee World World:
In kasta oo qaar badan oo ka mid ah natiijooyinka degdegga ah lagu arko tafaariiqda, haddana ma qiyaasi karo waxa maalgashiga barnaamijyada sidan oo kale ah ay u sameyn karto sii-haynta macaamiisha ee Software-ka shirkadaha Adeegga ah. Awoodda aad dhab ahaan isku arki karto oo aad shaashad ku wadaagi karto ayaa adeegga macaamiisha ka dhigaysa mid fudud oo aan ka ahayn riyada hadda jirta ee ay tahay Waxay umuuqataa in Vee24 kaliya aysan aheyn hogaamiyaha warshadan, ay yihiin shirkada kaliya ee hada bixisa adeegan. Shaki kuma jiro inay si weyn u guuleysan doonaan! Waxaan horeyba ugu garaacnay hawlgal tixraac ah.
Marka ha ilaawin inaad ogeysiiso inaad ka ogaatay adeegga adoo maraya Martech Zone!
Waqtiga Warbaahinta Bulshada
On vee24: Waan heshiin kari waayey wax badan. Waxaan u adeegsaneynaa qaybta vee24 ee macaamiisho fara ku tiris ah suuqa german waana wax laga naxo. Laakiin maxay muhiim u tahay sida tiknoolajiyada: waxay ka caawisaa macaamiisheenna inay ganacsi wadaan. Aragtidayda tani waa mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee lagu soo saaro raadadka iyo iibka kororka ah ee internetka!